छोरीसँग बिहे गर्नेलाई १८ अर्ब दाइजो दिने बाबुको घोषणा, बिहे गर्ने भए पूरा पढ्नुहोला ।। « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? अप्नाउनुहोस् यी घरेलु विधि
अभियुक्तलाई छुटाउने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्त गर्न एमालेभित्रै चर्कियो आवाज
पाँच महिनापछि आजबाट खुल्यो त्रिभुवन विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान
युट्युबमा भाइरल बनेकी सुब्बाको हत्या अभियोगमा एक युवक प’क्राउ
जसपाको सिरहा क्षेत्र न.१ प्रदेश सभाको कार्यवाहक अध्यक्षमा नेता महतो चयन
गोरखामा दलित कर्मचारीमाथि दु’र्व्यवहार
छोरीसँग बिहे गर्नेलाई १८ अर्ब दाइजो दिने बाबुको घोषणा, बिहे गर्ने भए पूरा पढ्नुहोला ।।
May 24, 2018 मा प्रकाशित
सैघाली खबर, काठमाण्डौँ, जेठ।
तपाईको बिहे गर्ने उमेर भयो ? याँ बिहे गर्ने सोच बनाईरहनुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने यो समाचार एकपटक अवश्य पढ्नुस । साँच्ची यो खबर अनुसार यहाँ एकैचोटी दुलहीको पति मात्र होइन अर्बपति समेत हुने मौका छ । वास्तवमा एकजना अर्बपतिले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने ज्वाइँलाई १८ अर्ब नगद दाइजो दिने घोषणा गरेका छन् ।
चिनिया अर्बपति व्यापारी सेसिल चाओ जे सुंगले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले आफ्नी समलिंगी छोरीलाई बिहे गरेर अन्माइदिन मोटो रकम दाइजोको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनकी छोरी गिगी लेस्बियन छिन् । उनी पछिल्लो ९ वर्षदेखि आफ्नो एक लेस्बियन साथीसँग बस्दै आएकी छिन् ।
उनलाई बिहे गर्ने कोहीपनि केटा तयार भएका छैनन् । त्यसैका कारणले अर्बपति पिताले छोरीको बिहे गरिदिन यस्तो मोटो रकमको जुक्ति निकालेका हुन् । दाइजोको लोभ देखाएर छोरी बिहे गरिदिने यो उनको दोश्रो प्रयास हो । यसपटक उनले अफरको रकम निकै बढाएका छन् । यो भन्दा पहिले सन् २०१२ मा गिगीको विवाहका लागि उनले छोरीसँग बिहे गर्नेलाई झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए ।
मोटो रकम पाउनका लागि अर्बपतिकी छोरीसँग बिहे गर्न २० हजार युवकहरुले दरखास्त हालेका भएपनि कोहीपनि सफल भएनन् । यो पटक दाइजो रकम दोब्बर पारेपछि लेस्बियन छोरीको पक्कै बिहे हुने सेसिलको विश्वास छ । उनले सोसल मिडियामार्फत पनि यो कुराको खुब प्रचार गरेका छन् । आफुले छोरी बिहे गर्ने भन्दै धेरै युवाहरुले उनीसँग सम्पर्क राखिरहेका छन् ।।
भारतमा ८१ दिनपछि सबैभन्दा कम कोरोना संक्रमित
रोनाल्डोले पानीकाे बाेतल उठाउँदा कोकलाई चार अर्ब डलर घाटा
अमेरिकालाई सुरक्षित यात्रा सुचीमा राख्ने युरोपियन युनियनकाे निर्णय
अमेरिकाकाे विभिन्न ८ राज्यहरूमा सङ्घीय बेरोजगारी सुविधा कार्यक्रम अन्त्य गर्दै
पेन्सनमा भेदभाव गरिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक आन्दोलित